मन्त्री खनाल भन्छन् : राँगाको मासु खानलायक छैन (भिडियो सहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मन्त्री खनाल भन्छन् : राँगाको मासु खानलायक छैन (भिडियो सहित)
काठमाडौं कृषि तथा पशुपंछी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले काठमाडौंमा मासुबारे अलिक बढि सचेत हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयले मासुको नियमन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौंमा राँगाको मासु खानलायक छैन । अरु मासु पनि व्यवस्थित छैनन्।’
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘हामीले काठमाडौंमा मासुको अनुगमन गरिरहेका छौं । नेपालमा मासुको प्रयोग बढि नै हुने गरेको छ । तर, नियमन भने हुन सकेको छैन् । राँगाको मासुको सन्दर्भमा निकै नै अप्ठ्यारो स्थिति छ । काठमाडौंमा दैनिक ३५० देखि ४०० सम्म राँगा वध गरिन्छन् । वध गर्ने मुख्य २० वटा ठाउँ छन् । तीमध्ये ५ वटामा अनुगमन गर्दा ४ गुणस्तर नपाएकोले हामीले अहिले ४ वटामा सिलबन्दी गरिसकेका छौं । राँगाको मासु काट्ने ठाउँमा आम उपभोक्ताको पहुँच हुँदैन् । तर, खसी, कुखुरा, भेडा र च्याङ्ग्राको स्थिति अलिक फरक छ । त्यहाँ उपभोक्ताको सहज पहुँज हुन्छ । प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । तर, राँगा काट्ने ठाउँ अव्यवस्थित् रहेकोले हामीले बन्द गर्यौं ।’
साक्षात्कारमा उनले भने, ‘विगतमा कसरी व्यवस्था गरिएको थियो मलाई त्यति थाहा भएन् । तर, अहिले जनताका सरोकारका विषय दुषित, प्रदुषित खाद्यवस्तुबाट रोगहरु लाग्छ । पानीबाटपनि रोगहरु उत्पन्न भएका छन् । खाने तेल र दुधकोपनि स्थिति त्यस्तै छ ।’ बधशालालाई व्यवस्थित गर्नको लागि मासु जाँच ऐन–२०५५ जारी गरिएपनि कार्यान्वयन नभएकोमा उनले गुनासो पोखे । उनले थपे,‘नेपालमा ऐन पारित गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । अब कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनपर्छ । ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मासुको स्थिति राम्रो देखिएन् ।’
त्यस्तै उनले हेटौंडामा रहेको पूरानो वधशालालाई पूनः सञ्चालनमा ल्याउनेबारे सरकारले तयारी गर्ने पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘दैनिक ४ सय राँगा काट्न सकिन्छ । हेटौंडालगायत अन्य ठाउँमा वध गरेर काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सरकारले यसबारेमा पनि सोचेको छ।’
मन्त्री खनालले नेता गौतमको प्रतिनिधिसभामा आवश्यक रहेको पनि सुनाए ।
‘प्रतिनिधिसभामा उहाँको आवश्यक नहुने भन्ने कुरा होईन, उहाँको आवश्यक छ । तर, चुनाव भएको एक वर्ष पनि भएको छैन । अरुलाई राजिनामा गराएर उहाँलाई ल्याउनको लागि केही औचित्यहरु पुष्टि गर्नुपर्छ । यसो गर्दा जनतालाई पनि सहज हुन्छ । यसकारणले उहाँलाई हामीले संसदमा लगेका हौं भनेर पुष्टि गर्नुपर्छ ।’, उनले थपे ।
पछिल्लो समय चिनी, खाद्य मल र पेट्रोलियम पदार्थमा महँगी देखिनुमा डलरको भाउ बढ्नुले पनि केही असर परेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘तर हाम्रो देशमा उत्पादित खाद्य वस्तु र छिमेकी देशबाट आयात हुने कुरामा डलरको त्यति धेरै असर त होइन होला । खाद्य वस्तुको कुरा गर्दा हिजो २ महिना अघि र अहिलेको तुलनामा मुल्यवृद्धि भएकोजस्तो मलाई लाग्दैन् ।’
उनले चाडपर्वको मौका छोपेर कसैले कालोबजारी र गलत काम गर्न खोजे सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हामीले बजार अनुगमन गरिरहेका छौं । कसैले पनि चाडपर्वको मौका छोपेर गलत गर्नेबारे नसोचे हुन्छ।’
वर्तमान सरकार सफल हुनैपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकार सफल हुनुको विकल्प छैन । दुई तिहाई सरकारको विकल्प अरु के हुन्छ अहिले ? सानातिना कुराहरु कहीँकतै बिग्रिएका रहेछन भनेपनि त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।’
उनले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय अहिले दलीय हिसाबले ओझेलमा परेको गुनासो पोख्दै भने,‘तर, कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा असन्दार्भिक चाहीँ होइन । अहिलेपनि यो बहस जारी रहनुपर्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसपनि सँगसँगै चलिरहँदा यसले हामीलाई बेफाईदा गर्दैन् ।’